ဘာမြူဒါအသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ (sac) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ဘာမြူဒါ sac - အသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကဘာမြူဒါအသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ (sac) တရားဝင်သီးခြားအကောင့်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ဘာမြူဒါဥပဒေပြုရေးတစ်ဦးချင်းစီအသနားခံပါ "အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်အသစ်များ၏" သို့မဟုတ် "အပုဂ္ဂလိကအက်ဥပဒေ" အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်ဘယ်အရာကိုအောက်မှာ "သီးခြားအကောင့်" လည်ပတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ တိုးမြှင့်အသနားခံ 2000 များ၏အသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ( "sac အက်ဥပဒေ") ပြဋ္ဌာန်းဖို့လွှတ်တော်ရသည်။ ဤပညတ်တရားကိုကုမ္ပဏီများအသစ်တစ်ခုပုဂ္ဂလိကအက်ဥပဒေများအတွက်ဥပဒေပြုရေးထံတောင်းဆိုမှုမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မအကောင့်ခွဲခြားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အခုတော့ကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသီးခြားအကောင့်ကို set up ပိုင်ခွင့်နဲ့ sac အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
Account တစ်ခုချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အခြားအကောင့်များပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမလာကြဘူး segregated ။ အဆိုပါအက်ဥပဒေအထွေထွေရှယ်ယာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏အကြွေး၏ liabilities တစ်ခုချင်းစီမှအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အဆိုပါ sac ရဲ့ယေဘုယျအကောင့်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအ sac ယေဘုယျအကောင့် liabilities မခွဲခြားအကောင့်အသစ်များ၏မဆိုပေးဆောင်ဖို့သာရရှိနိုင်ပါသည်။
အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများမရှိကြပေ။ အဆိုပါအက်ဥပဒေကဤသီးခြားအကောင့်အတူတူကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စဉ်းစား။ သို့သော်တိုင်းအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်မိဘကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံများကဲ့သို့ပြုမူဆက်ဆံသည်။
တစ်ဦး sac များအတွက်အသုံးပြုသည်
sac ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီ policyholder ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားအကောင့်ခဲ့ရှိရာအာမခံစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဇာစ်မြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အာမခံကုမ္ပဏီများအားလည်းမသန်စွမ်းနှင့်အသက်အာမခံထုတ်ကုန်များကဲ့သို့၎င်းတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအာမခံထုတ်ကုန်အကြားကသူတို့ရဲ့သိုက်ခွဲခြားနိုင်ခဲ့တယ်။
အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာရှယ်ယာအများအပြားကိုအတန်းနှင့်အတူမာစတာ-feed ကိုရန်ပုံငွေပလက်ဖောင်းများနှင့်အဆောက်အဦများထူထောင်ရန်အဘို့အ sac ရဲ့အလွန်အသုံးဝင်တွေ့။ ထို့အပြင်တစ်ဦး sac ကွဲပြားခြားနားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုပိုင်ဆိုင်မှု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားအကောင့်ရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာမြောက်မြားစွာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုင်ဆောင်ကုမ္ပဏီများမှ sac ရဲ့အသုံးဝင်ရှာပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများ client ကို, ပိုင်ဆိုင်မှု, သို့မဟုတ်အခြားစံသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်အကောင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများနှင့်အတူကုမ္ပဏီများကသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းအဘို့သီးခြားအကောင့်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားတစ် sac သုံးနိုငျမည်သို့အနည်းငယ်ဥပမာဖြစ်ကြသည်။ တိုင်းအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်အပ်ချုပ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်အကောင့်ပိုင်ရှင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် fit စေနိုင်ပါတယ်။
ဘာမြူဒါမြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းတည်ရှိသည်နှင့်ဗြိတိသျှပြည်ပနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကယင်း၏ဧကရာဇ်အဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်နှင့်အတူဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အောက်မှာနေတဲ့ပါလီမန်မှီခိုသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးနှစ်ဦးအိမ်သူအိမ်သားပါလီမန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။
တစ်ဦးကဘာမြူဒါအသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ (sac) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုငျ:
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: ကော်ပိုရိတ်, ဝင်ငွေ, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်, အမွေဥစ္စာ, အိမ်ခြံမြေ, တံဆိပ်ခေါင်းခွန်, ဒါမှမဟုတ်အခွန်ရှောင်အခွန်မျှမဘာမြူဒါအတွင်းရှိပါသည်။
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ရှင်များ: နိုင်ငံခြားသားများတစ် sac 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: sac ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသော client များအတွက်သီးခြားအကောင့်သို့ပိုင်ဆိုင်မှု၏လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
• ပိုင်ရှင်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု: ပညတ္တိကျမ်းပိုင်ရှင်တွေကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ပိုင်ရှင်၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသည်သေချာစေရန်အထူးကိုယ်စားလှယ်လိုအပ်သည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ပိုင်ရှင်များ '' အမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းဘယ်တော့မှနေကြသည်။
• အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါသည်စာရင်းစစ်: အစိုးရကဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက်မဟုတ်သလိုစာရင်းစစ်ဖြည့်စွက်မလိုအပ်ပါဘူး။
• အင်္ဂလိပ်: ဘာမြူဒါ၏တရားဝင်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
sac ကုမ္ပဏီများသည်ဘာမြူဒါအတွင်းအခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာ entity အလားတူနာမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ sac အမည်များစကားတို့ကို "အသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်အတိုကောက် "sac" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမည်ဖြင့်သတ်မှတ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ letterhead စာရေးကိရိယာ, စီးပွားရေးကတ်များက်ဘ်ဆိုက်, လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်မဆိုပရိုမိုးရှင်းဒီဇိုင်းများတွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သစ်ကုမ္ပဏီပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအောက်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် sac အက်ဥပဒေအောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူနှစ်ဦးသီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်တစ်ပြိုင်နက်ရရှိသောနိုင်ပါသည်။ တည်ဆဲဘာမြူဒါကုမ္ပဏီများသည်အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် sac ဖြစ်လာဖို့မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
1 "ဒေသခံ" ကုမ္ပဏီများမှနိုင်ငံသားများကပိုင်ဆိုင်ကြသည်; နှင့်
2 ။ နိုင်ငံခြားသားများပိုင်ဆိုင်သော "ကင်းလွတ်" ကုမ္ပဏီများမှ။
ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီများဘာမြူဒါငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အာဏာပိုင် ( "BMA") ကအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ၏ထုတ်ဖော်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ အစုရှယ်ယာအနည်းဆုံး 10% ကိုင်ပြီးတိုင်းပိုင်ရှင်ထောက်ပံ့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူသူ / သူမ၏ကောင်းသောရပ်တည်မှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြေငြာ execute ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ sac အတည်ပြုပြီးတာနဲ့မဲပေးရှယ်ယာရှိခြင်းကြဘူးသူကသီးခြားအကောင့်အသစ်များ၏နောက်ဆက်တွဲ "အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေ" ဟု BMA တို့ကဆောင်စိစစ်ပြီးခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင် ( "မှတ်ပုံတင်") နှင့်အတူတစ်ဦး "Form ကို 1" ပြဌာန်းချက်အသိပေးစာရမည်ဖြစ်သည်။ Form ကို 1 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကုမ္ပဏီ sac အက်ဥပဒေစာရင်းကိုင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည်သောရည်ရွယ်ချက်ဖော်ပြသည်။ အခြေခံအားဖြင့်လျှောက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်များအတွက် sac အက်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းလိုက်နာလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြု။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် BMA မှလျှောက်လွှာနှင့်တင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်, sac ၏နာမတော်ကိုအများပြည်သူစစ်ဆေးခြင်းနိုင်သည့်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်မည်တွင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကို အသုံးပြု. များအတွက်အကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ sac ၏အဆိုပြုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုတောင်းဆိုရန်စေခြင်းငှါသတိပြုပါ။ ဒါကြောင့်လျှောက်ထားအချိန်ကုန်သက်သာဖို့လျှောက်လွှာကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အကျဉ်းစီးပွားရေးအစီအစဉ်ကိုပွငျဆငျကြောင်းအကြံပြုသည်။
အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်တည်ထောင်သည့် sac ထံမှသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖန်တီးမပေးပါဘူး။
သီးခြားအကောင့်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုများအထွေထွေရန်ပုံငွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းသီးခြားရန်ပုံငွေအဖြစ် sac နေဖြင့်ကျင်းပရမည်ဖြစ်သည်များနှင့်အကောင့်ပိုင်ရှင်များ၏အကျိုးအတွက်သီးသန့်ကျင်းပကြသည်။ အထူးသီးခြားအကောင့်မြှုတ် liabilities သာအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကနေအကြွေးမှပေးဆောင်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သီးခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေအထွေထွေအကောင့်မြှုတ် liabilities နှင့်၎င်း၏အကြွေးမှကာကွယ်ရလိမ့်မည်။
အဆိုပါ sac ရဲ့ယေဘုယျအကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် sac အားဖြင့်ကျင်းပသည့်တစ်ခုတည်းသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ အထွေထွေအကောင့်နဲ့ဆက်စပ်သာလျှင် liabilities အထွေထွေအကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှပေးဆောင်လိမ့်မည်။
သီးခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေ '' အကျိုးစီးပွား, အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးအကောင့်ပိုင်ရှင်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားဆက်ဆံအကောင့် ပတ်သက်. sac ချည်နှောင်ထားတဲ့အုပျခြုပျရေးစာရွက်စာတမ်းတွင်ပါရှိသောနေကြသည်။ (ရှိပါက) အုပျခြုပျရေးစာရွက်စာတမ်းအကောင့်တစ်ခုပိုင်ရှင်နှင့်မဲပေးခွင့်ဖြစ်လာများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုထွက်သတ်မှတ်ထားသင့်တယ်။ ထို့အပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းရှင်းပြချက်, အမြတ်အစွန်း၏ငွေပေးချေမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်မည်သို့အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ဖျက်သိမ်းလျက်ရှိရ၏။
တတိယပါတီနှင့်အတူကန်ထရိုက်အကျိုးစီးပွားကို, အခွင့်အရေး, နှင့်စာအရေးအသားအတွက်အားလုံးပါတီများ၏တာဝန်ဝတ္တရားထွက်သတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကန်ထရိုက်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်အတွက် sac ရဲ့ယေဘုယျအကောင့်သို့မဟုတ်အခြားအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်နှင့်အတူမပါဝင်ပါကြောင်းရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
တိုင်း sac ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအားဖြင့်လိုင်စင်ရနေတဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကိုယ်စားလှယ် ( "SAR တွင်") ကိုခနျ့အပျရမယျ။ အဆိုပါ SAR အားလုံးသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအများပြည်သူတို့ကကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နိုင်ပါတယ်သော sac ရဲ့ဒါရိုက်တာနှင့်အရာရှိမှတ်ပုံတင်မည်တွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
SAR ၏ 30 ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်မှရေးသားထားသောအစီရင်ခံစာတင်သွင်းရပါမည်:
(က) sac ရဲ့ယေဘုယျအကောင့်မကြာမီကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောသို့မဟုတ်တစ်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်; သို့မဟုတ်
(ခ) အဆိုပါ SAR တွင်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် sac အက်ဥပဒေအပြည့်အဝလိုက်နာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသို့မဟုတ်မည်သည့်ရာဇဝတ်ရှေ့ဆက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့ sac သို့မဟုတ်ယင်း၏အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်အသစ်များ၏မဆိုဆန့်ကျင်စတင်ယုံကြည်သည်သိရသည်။
ကော်ပိုရိတ်, ဝင်ငွေ, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်, အမွေဥစ္စာ, အိမ်ခြံမြေ, တံဆိပ်ခေါင်းခွန်, ဒါမှမဟုတ်အခွန်ရှောင်အခွန်မျှမဘာမြူဒါအတွင်းရှိပါသည်။ sac ရဲ့ဘာမြူဒါအတွင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရပါဘူး။ မှတ်ချက်: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခွန်ထမ်းများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပြုရန်တွန်းအားပေးမည်သည့်တိုင်းပြည်နေထိုင်သူသူတို့ရဲ့အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
sac ရဲ့ကတိုင်းစာချုပ်နှင့်စာရေးကိရိယာ letterhead တစ်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ကုမ္ပဏီကြောင်းတတိယပါတီများမှမှထုတ်ဖော်ရပေမည်။ အဆိုပါအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်၏အထောက်အထားအားလုံးအရောင်းအများအတွက်တိုင်းစာချုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားရမည်ဖြစ်သည်။
အီးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေမှအညီအားလုံးကိုဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း၏ပြင်ဆင်မှုအပါအဝင်စာရင်းကိုင်အလေ့အကျင့်များနှင့်စံချိန်စံညွှန်းကိုလက်ခံအတွင်းဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များအသီးအသီးအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်နဲ့ဆက်စပ်အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှု, ဝင်ငွေ, liabilities, ကုန်ကျစရိတ်, စတာတွေပါဝင်ရမည်။ တစ်ဦးကယေဘုယျအကောင့်စံချိန်မဆိုအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်နဲ့ဆက်စပ်မရအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှု, ဝင်ငွေ, liabilities နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖေါ်ပြခြင်းထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်း sac သူတို့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးစီးပွားအသေးစိတ်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်များ၏တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမှတ်ပုံတင်အများပြည်သူပွင့်လင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ရှယ်ယာများ၏ထုတ်ပေးရေးမလိုအပ်ပါ။ အုပျခြုပျရေးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်များအတွက်သီးခြားစာချုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏနှင့်အကောင့်ပိုင်ရှင်များ၏အခွင့်အရေးကိုသတ်မှတ်။ ရှယ်ယာထုတ်ပေးလျှင်သို့သော်အားလုံးရောင်းအားသီးခြားအကောင့်ထဲမှာထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီးအစုရှယ်ယာအတွက်တိကျတဲ့အကောင့်နဲ့ဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ အားလုံးစာအုပ်တွေ, အကောင့်များနှင့်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်မှတ်တမ်းများ, ထုတ်ပြန်ခဲ့သောပိုင်ရှင်များနှင့်ရာခိုင်နှုန်းအတိုးစုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
sac ရဲ့ခွဲဝေပေးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်နဲ့ဆက်စပ်ရှယ်ယာများ၏အထူးသဖြင့်လူတန်းစားစပ်လျဉ်းဖြန့်ဝေပါစေနိုငျသညျ။ ခွဲဝေကြေညာစေခြင်းငှါနှင့်အခြားဖြန့်ဝေကိုဖန်ဆင်းရှေ့တော်၌ထို sac အက်ဥပဒေအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့် solvency များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ရှိပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကောင့်ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူစာချုပ်ထဲမှာဖယ်ထုတ်လိုက်ဘဲနေလျှင်, sac အက်ဥပဒေဤဝေါဟာရများထည့်သွင်းရန်တိုင်းစာချုပ်ရန်လိုအပ်သည်:
1 ။ အဘယ်သူမျှမပါတီများဆန့်ကျင်ပြန်လည်ကုတစ်ခုသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုဒါမှမဟုတ်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်နဲ့ဆက်စပ်မအရေးဆိုမှု၏စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ထဲမှာမဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားရှာကြလိမ့်မည်။
2 ။ မည်သည့်ပါတီအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်နဲ့ခိုင်လုံသောအသင်းအဖွဲ့သက်သေပြခြင်းမရှိဘဲအထက်အပိုဒ် 1 တှငျဖျောပွထားထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်ကုသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားတည်ထောင်အတွက်အောင်မြင်လိုလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောပါတီအကျိုးစီးပွားဟုပြောသည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ကု၏တန်ဖိုးညီမျှတစ်ပေါင်းလဒ်၏ငွေပေးချေမှုများအတွက် sac ခံထိုက်ပေ၏ကျင်းပလိမ့်မည် နှင့်
3 ။ မည်သည့်ပါတီမျးစားသို့မဟုတ်အလေးထားဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်မရဆိုတာဝန်ယူမှုများအတွက်အသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအပျေါမှာလဲဗီးကွပ်မျက်လျှင် sac သာတူညီမျှဆေးတစ်လက်ရရှိသွားသည်အထိ, ထိုပါတီသည် sac များအတွက်ယုံကြည်မှုအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယင်းအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်နဲ့ဆက်စပ်မကြွေးမြီသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုကိုပေးဆောင်ဖို့သိမ်းဆည်းရမိနေကြသည်လျှင်, sac ပွနျလညျထူထောငျရှာကွလိမျ့မညျနှင့်နိုင်ခြင်းလျှင်ထိုကဲ့သို့သောတရားမဝင်ဖမ်းဆီးရမိမှအကြိုးသူကိုပါတီအနေဖြင့်ငွေကြေးပြန်လည်တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
sac ရဲ့ကုမ္ပဏီများသဘောတူညီခကျြ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဖျက်သိမ်းဘို့သာလေတိုက်-up, လို့ရတယ်။ အရည်ချင်းစီခွဲခြားဆက်ဆံအကောင့်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှင့် liabilities နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါ sac အက်ဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရည်တဦးတည်းအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသူတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်မဟုတ်လျှင်အခြားအအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်သို့မဟုတ်အထွေထွေအကောင့်များ၏အကြွေးတွေဆပ်ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်, ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့်အုပျခြုပျရေးစာရွက်စာတမ်း၏စည်းကမ်းချက်များလိုက်နာပါလိမ့်မယ်ထက်သေချာပါလိမ့်မယ်။
ပိုင်ရှင်များ '' အမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။ သာ sac ကုမ္ပဏီအမည်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက sac သုံးမှငါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း sac ကုမ္ပဏီများသည်ဘာမြူဒါအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကဘာမြူဒါအသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ (sac) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုငျ: အဘယ်သူမျှမအခွန်, 100% ပိုင်ဆိုင်မှု, privacy ကို, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဥပဒေပိုင်ရှင်တွေကာကွယ်ပေးသည်မရှိ, လိုအပ်သောစာရင်းစစ်, တရားဝင်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။